Xildhibanada hirshabelle oo beel beel u kala jabayo (aqri) | Xaqiiqonews
Xildhibanada hirshabelle oo beel beel u kala jabayo (aqri)
Qaar ka mid ah Xildhibaanadii taageersanaa Madaxweynaha xilka laga qaaday Cali C/llaahi Cosoble ayaa ku biiray Xildhibaanadii kale, iyagoo taageeray go’aankii Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre uu ku ayiday xil ka qaadista.
Xildhibaanadan oo tobaneeyo gaarayay ayaa sheegay inay ka tanaasuleen mowqifkooda hore, ayna dalbanayeen cafis, waxaana qaarkood ay sheegeen in wixii xalay ay sameeyeen ay fowdo ka aheyd xildhibadan ayaa ka soojeeda beelaha galjecel iyo jaljeele oo ka soo jeedaan gudoomiyaha iyo kuxigeenka kowaad ee barlamanka hirshable.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in midnimada Baarlamaanka la ilaaliyo, isla markaana aan habooneyn fowdo iyo qas, waxaana uu ka aqbalay cafiskooda.
Cali C/llaahi Cosoble ayaa waxaa la sheegay inay haatan dhinaciisa ku hareen xildhibaano ka yar 10 xildhibaan oo ka soo jeeda beesha xawaadle, waxaana u muuqdaa mid xaalka ku sii xumaanaya, maadaama ay garbihiisa ka baxeen Xildhibaanadii taageersanaa.
Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maalin ka hor xil ka qaadis ku sameeyay Cali Cosoble, kaddib markii ay mooshin ka keeneen.